44 အဘို့ရလဒ် ninjago games
Ninja လိပ်တစ်ဦးဖုန်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ပြန်ပေမယ့်ဒီအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သူကကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်ပြီးနောက်အမျိုးမျိုးသော position နဲ့ဆက်ဆံစေနိုင်သည်။ ကံကောင်းပါစေ!
ဒီဂိမ်းစီးရီး Ninjago ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ kai ဥမင်ထဲမှာပျောက်ဆုံး, ဥမင်ထဲကထွက်ရမယ့်လမ်းလည်းမရှိဒုံးပျံကိုအသုံးပြုသည်ဥမင်၏နှုတ်တော်ထွက်ပေါ်တက်တွန်းအားပေး, သငျသညျ kai ထိုကဲ့သို့သောကျောက်ဆောင်အဖြစ်အတားအဆီး fly.Note ဖို့ပိုပြီးစွမ်းအင်ကိုရရှိရန်စိန်ပွင့်များကိုစုဆောင်းထဲမှာသစ်ပင်များကိုကူညီ
action ကိုဂိမ်း Ninja ဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့မိတျဆှေ, မကောင်းသောလူများကဖမ်းဆီးရမိသည်။ သွားပြီးစူးစမ်းသူတို့၏ရဲတိုက်နှင့်သင်တို့ကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်လူတိုင်းထွက်သုတ်!
ဒီငှက်၏အဖိုးတန်ကြက်ဥခိုးယူခဲ့သည်။ သူကတကယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့လေသူကသူတို့အားလုံးကိုပြန်ရကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူကသူ့ကိုကူညီမယ့်ဒုံးပျံတယ်။ သငျသညျသူအပေါငျးတို့သပျောက်ဆုံးကြက်ဥကိုစုဆောင်းနိုင်ထင်ပါသလား?
ကြည့် & ထို Diablo စီးရီးအလားတူခံစားရကြောင်းအံ့သြဖွယ်ရှာဖွေနေ isometric RPG ။ ဝိုး!
scooby Doo အာကာသသင်္ဘောကို
အာကာသသင်္ဘောပေါ် Scooby Doo နှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်ပိုပြီးမှတ်ဂိုးသွင်းဖို့အားလုံးကိုလမ်းတစ်လျှောက်မိမိအစာအာဟာရကိုစုဆောင်းပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ !
Lego မြို့: ထွန်းပြက္ခဒိန်
Lego မှစီးတီးခရစ္စမတ်အချိန်များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်နှင့်ကဒီကားဂိမ်းနဲ့စတင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အ Lego မှရဲ့စွတ်ဖားမောင်းနှင့်သင်မိုဃ်းပွင့်အပေါ်တတ်နိုင်သလောက်အများအပြားခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကိုစုဆောင်းပါ။ အများကြီးလက်ဆောင်များကိုပိုပြီးမှတ်!
သင့်ရဲ့ Magic Wand သုံးပါနှင့်သင်ဟယ်လိုရှေ့၌သင်တို့မှော်ဆေးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အပေါငျးတို့သပါဝင်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင်နှင့်သင့်သောအဘို့ကိုဘားသို့သူတို့ကိုငါလှည့်များအကြားလမ်းအတွက်ရရန်ကြိုးစားလျှင်သင်ကောငျးကြိုးအတှကျဂရုမစိုက်ပါဘူးအဖြစ်။
ကန္တာရတောင်ကုန်းကျော်သင့်ရဲ့စက်ဘီးစီးနှငျ့သငျကျော် Tipping မပါဘဲမျှမျှတတနေထိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောရေပုလင်းရဲ့အချက်များရရှိရန်စုဆောင်း